Dhizaina zano iri iro kiyi yekubudirira kwekudyara | Ehupfumi Zvemari
Dhizaina zano iri iro kiyi yekubudirira kwekudyara
Imwe yemhosho dzakaipisisa iwe dzaungaite mukutungamira kwekudyara kuyedza kuzvichengeta zvese mumusoro mako, uchiyeuchidza zvaunofanira kuita. Iwe wakabatikana iwe, zvimwe zviitiko zvaunofanirwa kuitaKunyanya kumanikidzwa kwaunozonzwa kusangana nenguva dzakatarwa uye zvakanyanya mukana wekuti ukanganwe chimwe chinhu, kunze kwekunge waronga hurongwa hunobatika hwekugadzirisa zviwanikwa pamwe nekubudirira kune mashoma anotevera makore.
Neraki, pane nzira dzakadai uye inodaidzwa kuve ne mari yekudyara. Mumusika mune zvigadzirwa zvakasiyana siyana zvinobatsira kusimudzira basa iri uye zvimwe zvacho zvakanaka. Kumakomputa zvirongwa zvine alarm system nekuti kana yave nguva yekutenga kana kutengesa zvikamu pamusika wekutengesa. Hazvishamise kuti chiziviso chinogona kuburitsa rubatsiro rwakakura muchisarudzo chauri kuzoita mavhiki mashoma pamberi. Zvinoenderana nepfungwa yezvakakosha, chikamu chevatariri chisina kukosha hachifanirwe kuoneka muchirongwa chako chekutarisira muhomwe.
Usasarudze iyo manejimendi chirongwa chekuoma kwayo kwetekinoroji, yehunhu hwayo kana yezvitsigiro zvainazvo. Iyo purogiramu inofanirwa kuchinjiswa nzira yaunoronga kuishandisa. Kazhinji, chirongwa chinofanirwa kusangana nematanho maviri ekutanga. Kujekesa zvisungo zvenguva yemberi, ungangoda kushandisa mapurogiramu ehunyanzvi. Kune rimwe divi, pachinzvimbo chekukuyeuchidza nekungotarisa kamwechete nezvezvirongwa zvechimiro izvi, zvinokumanikidza kutsvaga yega data pane investment uye inomutsa mikana mizhinji yebhizinesi iwe yaunogona kuwana kubva kune aya mapuratifomu.
1 Kuisa Mari Kubudirira: Kuwana Tsika
2 Ronga kudyara pamberi penguva
3 Gadzirisa matambudziko
4 Yenguva yekutengesa
5 Dzivisa zvikanganiso zvakakura
Kuisa Mari Kubudirira: Kuwana Tsika
Chinhu chakanyanya kukosha nezve chirongwa chekudyara ndechechokwadi kupinda mutsika yekuzviziva iwe nemusika wemasheya uye kuushandura kuita mutungamiri kuronga kushandiswa kwenguva. Uchishandisa nenzira iyi, chero chirongwa chinomiririra rubatsiro rukuru kunyangwe iyo yawakaronga kuronga kudyara kubva kune chero mhando rezvekudyara zano.
Paunenge uchinge wasimbisa iyo Chinonyanya kukosha yaunoda kuita kubva panguva dzino mumugwagwa kusvika pakuzadzisa chinangwa, ichave nguva yekuvabatanidza kuita chirongwa chechokwadi chekudyara. Paunenge uchiita basa rekutenga, semuenzaniso, unogona kufungisisa pazvinhu zvekutanga zvaunofanira kutarisana nazvo kubva ipapo zvichienda mberi.
Zvinangwa zvaunofanira kuzvisarudzira
Sarudza kuti chii unoda kuzviita Chaizvoizvo.
Simbisa a bhajeti Zvekushanda mumisika yemari.
Sarudza chii kuchengetedzeka kana mari yemari iwe unoda kugadzirisa.
Enzanisa mitengo, mazwi, kondirakiti vhoriyamu yesarudzo dzakasiyana dzinopihwa nemisika yemari.
Sarudza kuti chii ruzivo masosi iwe unoda kushandisa.
Ita mashandiro mumisika yemari mu nguva chaiyo.
Ehe, iwe haufanire kuvimba kuti aya mafambiro ekudyara ari kukurumidza zvakanyanya maererano nenguva mafuremu. Iwe haugone kusarudza kwekutenga kusvika ndamboenzanisa akasiyana masosi uye chengetedza kuti imarii yaunoda kushandisa. Nguva inodiwa pabasa rega rega inoenderana nebasa rakabatanidzwa
Ehe, iwe haugone kurerutsa mashandiro uye zvakawanda zvekutenga hazvigone kuitwa munguva pfupi yakadaro nekuti zvaizoreva njodzi dzakawandisa mukushanda. Zvisinei, chero huwandu hwekushanda hunodiwa, zvinokwanisika kuona nguva inodiwa kuti uzviite zvinobudirira.
Ronga kudyara pamberi penguva
Kune rimwe divi, chirongwa chakazara chekudyara chiri nyore Pokutangira yekufamba mumusika wemasheya. Iyo inokupa iwe nekukurumidza kutarisa kwezvaunotarisira, asi haina zvinhu zvakakwana zvekunyatso gadzirisa yako nguva. Kusvikira izvozvi iwe uchafanirwa kuronga basa rako mukudyara iro rinofanira kuve rakarongeka uye zvishoma nezvishoma.
Uye iwe haukwanise kukanganwa izvo izvozvi zvaunoziva unoda maawa mangani Kune imwe neimwe mari, ichave nguva yekutsanangura mazwi avo. Munguva dzenguva dzaunofanirwa kugadzira zvitengwa, zvinokwanisika kuti iwe uve nemhando dzakasiyana siyana kana zviyero zvakasiyana zvemastock. Inguva yakakodzera yekujekesa kuti ndeipi sarudzo iwe yauchatora kubva zvino zvichienda mberi. Kupfuura kumwe kufunga kwehunyanzvi uye pamwe kunyangwe kubva kune yakakosha nzvimbo yekutarisa.
Chirongwa chakaringana chekudyara chinopatsanura zuva rega rega muzvikamu zvakawanda zvenguva, uye mune yega yega izvi unofanirwa kushanda pane chiitiko chekudyara icho chinokutendera iwe kufambira mberi mukuzadzikiswa kwezvinangwa zvako. Asi, kana iwe uchienda kubva kune imwe block kuenda kune imwe, iwe unofanirwa kuita zviitiko zvakasiyana, mune izvo zvinokwanisika kuti nharembozha kunze kweidzo dzakapfuura dzinobatanidzwawo. Chero zvazvingaitika, vanofanirwa kuve chimwe chezvinhu zvakakosha izvo marongero ekudyara anofanirwa kunangidzirwa. Iyo ndeimwe yenzira dzinokubatsira iwe kuti uite iwo mashoma kukanganisa mune ako mashandiro mumisika yequity.
Kune rimwe divi, kubva padanho re bhajeti pakutengaSemuenzaniso, unogona kuenda wakananga kubva kune mumwe uchienda kune mumwe mune pfupi pfupi nzvimbo yenguva. Shanduko dzakadai dzekutarisa dzinogona kunonoka kana kumiswa mumakwara avo kana usati wagadzirira zviitwa izvi. Asi kana iwe uchikwanisa kuzvipinza muchirongwa chako chekudyara, iwe unozobudirira zviri nyore uye pasina kunonoka zvimwe zvezvinonyanya kukosha zvauri kutsvaga mune mari dzauri kuita chero nguva yegore. Naiyo, iyo optimization ichave yakanyanyisa kushanda kupfuura kusvika zvino. Usakahadzika kuti uchaiwana kubva ikozvino.
Inoshandiswa sei? Imwe nzira ndeyekufanogadzirira kuitira kuti iyo mishumo uye dhata yakaunganidzwa ive yakagadzirira kana iwe wagadzirira kutanga kutengesa mumisika yemari. Zvirinani zvimwe pamwe, unogona ipa kune vamwe vanhu kana nyanzvi iro basa rekugadzirira ongororo iyo inobvumidza iwe kukurumidza shanduko uye kuongorora kweayo masimari iwe aunoshuvira kuita mumazuva anotevera kana mavhiki. Naizvozvi, iwe unenge uine yakawanda ivhu rakawanikwa mukugadzirira kwekutenga kwemasheya mumisika yemari.
Mune imwe tsinga, zvakakoshawo kuti iwe urambe uchifunga kuti hauzove nesarudzo kunze kwekuchengetedza nguva yakakwana gadzirisa sarudzo yako neimwe nzira kana imwe. Kunyangwe kana zvichikutorera iwe yakawanda nguva yekukudziridza sezvo zvivimbiso zvichizonyanya kureba kubva kune ino yekutanga uye panguva imwechete inoshanda zano. Kune rimwe divi, haufanire kumbosiya sarudzo dzaunofanirwa kuita mumisika yezvemari kuti ive yekuvandudza. Hazvishamisi kuti iwe unofanirwa kufunga kuti ndiyo yako mari iri panjodzi uye nepfungwa iyi, kuyedza kwakakosha hakuna kukosha nekuti unogona kubhadhara zvakanyanya kubva ikozvino.
Dzivisa zvikanganiso zvakakura
Kana iwe ukafunga nezvenyaya iyi, mazhinji emafungiro akataurwa anogona kunge ari pachena kwauri kubva pakutanga. Iwe zvechokwadi unonzwisisa izvozvo kukupa nguva yakakwana Kuenda kune chimwe kana chimwe chikamu chehurongwa hwekudyara kunogona kutora nguva yakareba kupfuura zvaitarisirwa kubva pakutanga. Nekuti zvazviri, zvazviri ndezvekutevera nhanho dzekudzivirira chero mhando yezvikanganiso mukudyara mumusika wemasheya, kupfuura izvo zvinonyanya kudikanwa uye izvo zvinosanganisira kudyara kweaya maitiro. Nechikonzero ichi, kurangwa muzviito zvako kunenge kuri kwako mamwe madhinominesheni semudyari mudiki nepakati.
Iyo yakajeka pfungwa, sezvaunogona neimwe nzira kunzwisisa. Zvichida hauna kunge uine iyo nguva kana kuvapo kwekudzidza kwakakosha kuti ufungisise zvine hungwaru pane zvimwe zvezvinhu izvi. Kana zvirizvo, hauna mubvunzo kuti iwe uchazoda imwezve nguva yekuzadzisa zvinangwa zvako zviripo mumisika yemari. Nekuti chirongwa chichava chisina basa mukudyara kana iwe usina chirango chakakodzera kumhanya nayo. Ino inguva yekupa hunhu hweprofile yako semushambadziri investor zvauri chaizvo.
Kana iwe mukukurumidza kwako ukakanganwa mamwe emazano aya atakakuzivisa, hapana mubvunzo kuti uchasangana negakava iro hazvikwanise kukutungamira kune chero chinhu chakanaka maererano nemari yako. Nenjodzi yekupedzisira yekuti iwe unogona kurasikirwa nechakanaka chikamu chesevha yakanangiswa kune ino investa. Kana zvirinani haufanire kugadzirisa maitiro aya nenzira inoshanda kwazvo, kuve imwe yezvikonzero zvakakosha kuti zviwanikwa zvako zvese zvirege kuzadzikiswa. Sezvo kune rimwe divi, zvichave zvakaitika kwauri nguva nenguva munhoroondo yako yakareba sediki uye wepakati investor.
Kubva pane ino mamiriro ese, hapana mubvunzo kuti kuronga mari yako kuchakubatsira mune iri basa rekuratidzira kune inogara yakaoma nyika mari. Iko zvaunofarira zvichagara zviri panjodzi uye pamwe kunyangwe shanduko yavo. Izvo zvakakodzera kuti utore nguva shoma uchiongorora aya mazano.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Dhizaina zano iri iro kiyi yekubudirira kwekudyara
Chii chinonzi inflation?
Mari mbiri dzekuyeuchidza